Kulahleke Abafana Ababili - IsiZulu by L. Molefe | All African Books
by L. Molefe
UFana (18) noSimo (12), bathunjwa besegalaji ngemoto yakubo bezothenga isinkwa. Uthe edlubulundela uFana, imoto emthumbile seyiseSoweto, uSimo nabathumbi kanye nemoto yabazali basebedlule ezindaweni eziningi bephikelele eVosloorus lapho uSimo ezothathwa khona yimoto ezokweqa naye umngcele iye eBotswana.
Baveza ukuhlakanipha nokho abafana emizameni yokuzophula ogibeni. Lapho abathumbi bedlulisela imoto naye kumuntu wakwelinye izwe ozokweqa naye umngcele, uSimo agcinezele inkinobho eyenza injini icishe. Amaphoyisa, ehamba noyise ababamba bonke abavalela.